I-China iAluminium-ngesandla eselukiweyo Set Set (AV-T72) abavelisi kunye nabathengi I-Aviva
SIHLALO SETHUBA LEALUMINUM
ISITOLO ESILANDELWAYO ISICWANGCISO SESICWANGCISO
IBHAYIBHILE YOKUGQIBELA ITHEYIBHILE
HPL ITHEYIBHILE TOP
Ibhlokhi B, Iflethi iphela, 22 Haikou Road, Zhangcha Town, Chancheng Zone, Foshan, Guangdong, China
Mon-Ilanga: 9: 00–18: 00
Isakhelo setafile esenziwe ngeAluminiyam (AV-T72)
1.Hand uyilo intambo
2.Lightweight kwaye yomelele isakhelo se-aluminium alloy
Isiko lokusebenzisa intambo ephothiweyo ukwenza ifanitshala yisiko elibuyela kumaxesha amandulo eYiputa. Ngezo ntsuku zakudala, ama-Egypt akudala ayesebenzisa intambo ephothiweyo ukwenza izihlalo zentambo yomtya. Izinto zazingathandwa ngamawaka eminyaka de kwaphinda kwavuka kwakhona njengezinto eziphambili kwiindidi zefanitshala. Abantu bayayixabisa ifenitshala yentambo ephothiweyo ngamandla ayo kunye nokuguquguquka okuvumela uluhlu olubanzi lweendlela zefenitshala kunye nemisebenzi.
Abayili befanitshala bathanda intambo kuba ibavumela ithuba lokuyila ubuninzi ngokusebenzisa uhlobo olunye kuphela lwezixhobo. Ukongeza ekuhombiseni, abayili banokukhetha enye yeendlela ezininzi zokubopha intambo kunye njengokuluka, ukudibanisa, ukuluka, okanye ukujija. Kwakhona kulula ukufaka intambo kunye nezinye izinto ukuze ujongeke nangakumbi.
Igumbi lokuphumla lomntu kunye nezihlalo ze-bistro ezenziwe ngentambo ephothiweyo, enesakhelo se-aluminium alloy edityaniswe nayo yonke intambo yemozulu ukwenza ingqokelela engaqhelekanga enokuhlala ngokulula iibhalkhoni kunye neendawo ezincinci, ngakumbi ezigqibeleleyo zebistros, imivalo yangaphandle, umgangatho, iphuli nasemva kwendlu.
Itheyibhile yekofu yenziwe nge-alloyum alloyum alloy ephothiweyo engasindi kakhulu kwaye yomelele kakhulu, kulula ukuyicoca kunye nokuhamba, ilungele naziphi na iincoko. Ilungele ukuhonjiswa kwasekhaya, ivenkile yekofu, i-bistro, igadi, ibala elingasemva, ibhalkhoni kunye ne cafe
1 x Itheyibhile (Isiseko seTheyibhile yentsimbi kunye neHPL yeTafile ephezulu)
I-2 x Isitulo esenziwe ngesandla seNtambo (i-Olefin eneCore Size Dia. 6mm kunye neplastikhi yeplastikhi yomthi)
Itheyibhile: Dia.70 * 73CM
Isihlalo: 55 * 55 * 81CM
Packaging: Stackable kunye Carton
Ulwazi olongezelelweyo: Umbala, ubungakanani, iziqwenga zecandelo zingenziwa ngokwezifiso, i-OEM ihlala yamkelekile.
Nxibelelana nathi ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu.
Egqithileyo IAluminiyam-ephothiweyo (AV-T72)
Okulandelayo: IAluminiyam-ephothiweyo (AV-T72)
Isakhelo setafile esenziwe ngeAluminiyam (AV-T23)
Isakhelo setafile esenziwe ngeAluminiyam (AV-T70)
Iseti yeBistro ephothiweyo yeAluminiyam (AV-T10)